လိုင်ယွန်ကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ကွာတားဖိုင်နယ်ပွဲအပြီးမှာ ဂွါဒီယိုလာက အသင်းသားတွေကို စကားတစ်လုံးတောင် မပြောခဲ့ဘူးလို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တဲ့ ဇင်ချန်ကို – Myan Ball
လိုင်ယွန်ကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ကွာတားဖိုင်နယ်ပွဲအပြီးမှာ ဂွါဒီယိုလာက အသင်းသားတွေကို စကားတစ်လုံးတောင် မပြောခဲ့ဘူးလို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တဲ့ ဇင်ချန်ကို
မန်စီးတီးအသင်း ချန်ပီယံလိဂ်ကွာတားဖိုင်နယ်မှာ လိုင်ယွန်အသင်းကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာ နည်းပြ ဂွါဒီယိုလာဟာ အဝတ်လဲခန်းအတွင်းကိုတောင် မဝင်ခဲ့ဘူးလို့ ဇင်ချန်ကိုက ထုတ်ဖော်ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်ဘီလူးဟာ လစ္စဘွန်းမှာ ကစားနေတဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ ဖလားရရှိရန် ရေပန်းအစားဆုံးအသင်းတွေထဲက တစ်သင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်းခံထားရပေမယ့်လည်း ကွာတားဖိုင်နယ်ကပဲ (၃) နှစ်ဆက်တိုက် ထွက်ခွာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဂွါဒီယိုလာဟာ လိုင်ယွန်နဲ့ပွဲမှာ ကစားကွက်ကို ပြောင်းလဲကစားခဲ့ပြီး လိုင်ယွန်အသင်းအတွက် ကော်နက်က အဖွင့်ဂိုးသွင်းပေးခဲ့ပြီးနောက် မူဆာဒမ်ဘီလီက နောက်ထပ် အနိုင်ဂိုး (၂) ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ ပွဲအပြီးမှာ ဂွါဒီယိုလာရဲ့ ကစားကွက်ကို ဝေဖန်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
“ဂွါဒီယိုလာက အဝတ်လဲအခန်းအတွင်းကိုတောင် မဝင်ခဲ့ပါဘူး။ ပွဲအပြီးတော့ ဘာစကားတစ်လုံးမှလည်း မပြောခဲ့ပါဘူး။ အားလုံးရှင်းနေရင် ဘာကို ပြောစရာရှိမှာလဲ? အသင်းအတွက် နောက်ဆုံးပွဲတွေ ကစားခဲ့တဲ့ ဒေးဗစ်ဆေးလ်ဗား နဲ့ ဘရာဗိုအတွက်အတော့ ရှက်စရာပါ။ ကျွန်တော်တို့ သူတို့အတွက် ပထမဆုံးအနိုင်ရချင်ခဲ့ပါတယ်” လို့ ဇင်ချန်ကိုက ထုတ်ဖော်ပြောသွားခဲ့ပါတယ။်
လိုင်ယွန်အသင်း ဆီမီးဖိုင်နယ်ကို တက်လှမ်းသွားခဲ့တာကလည်း သူတို့အသင်းရဲ့ အနိုင်ရလိုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ ဇင်ချန်ကို က ယုံကြည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။“သူတို့က ကျွန်တော်တို့ထက် ပိုပြီး အနိုင်ရချင်စိတ် ပြသခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို မြင်ရလွယ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ နောက်တစ်ဆင့်တက်သွားတာပါ။ ဒီလိုပြိုင်ပွဲ ဒီလိုအဆင့်မျိုးမှာ ပိုကောင်းတဲ့အသင်းဆိုတာ မရှိပါဘူး။ အနိုင်ရလိုစိတ်ကပဲ အရေးကြီးတာပါ” လို့ ထပ်ပြီးပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
လိုင္ယြန္ကို ရႈံးနိမ့္ခဲ့တဲ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္ကြာတားဖိုင္နယ္ပြဲအျပီးမွာ ဂြါဒီယိုလာက အသင္းသားေတြကို စကားတစ္လံုးေတာင္ မေျပာခဲ့ဘူးလို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္တဲ့ ဇင္ခ်န္ကို
မန္စီးတီးအသင္း ခ်န္ပီယံလိဂ္ကြာတားဖိုင္နယ္မွာ လိုင္ယြန္အသင္းကို ရႈံးနိမ့္ခဲ့တဲ့ပြဲအျပီးမွာ နည္းျပ ဂြါဒီယိုလာဟာ အ၀တ္လဲခန္းအတြင္းကိုေတာင္ မ၀င္ခဲ့ဘူးလို႔ ဇင္ခ်န္ကိုက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။ ပရီးမီးယားလိဂ္ဘီလူးဟာ လစၥဘြန္းမွာ ကစားေနတဲ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္ျပိဳင္ပြဲမွာ ဖလားရရွိရန္ ေရပန္းအစားဆံုးအသင္းေတြထဲက တစ္သင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းခံထားရေပမယ့္လည္း ကြာတားဖိုင္နယ္ကပဲ (၃) ႏွစ္ဆက္တိုက္ ထြက္ခြာခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။
ဂြါဒီယိုလာဟာ လိုင္ယြန္နဲ႕ပြဲမွာ ကစားကြက္ကို ေျပာင္းလဲကစားခဲ့ျပီး လိုင္ယြန္အသင္းအတြက္ ေကာ္နက္က အဖြင့္ဂိုးသြင္းေပးခဲ့ျပီးေနာက္ မူဆာဒမ္ဘီလီက ေနာက္ထပ္ အႏိုင္ဂိုး (၂) ဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။ ပြဲအျပီးမွာ ဂြါဒီယိုလာရဲ႕ ကစားကြက္ကို ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
“ဂြါဒီယိုလာက အ၀တ္လဲအခန္းအတြင္းကိုေတာင္ မ၀င္ခဲ့ပါဘူး။ ပြဲအျပီးေတာ့ ဘာစကားတစ္လံုးမွလည္း မေျပာခဲ့ပါဘူး။ အားလံုးရွင္းေနရင္ ဘာကို ေျပာစရာရွိမွာလဲ? အသင္းအတြက္ ေနာက္ဆံုးပြဲေတြ ကစားခဲ့တဲ့ ေဒးဗစ္ေဆးလ္ဗား နဲ႔ ဘရာဗိုအတြက္အေတာ့ ရွက္စရာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူတို႔အတြက္ ပထမဆံုးအႏိုင္ရခ်င္ခဲ့ပါတယ္” လို႔ ဇင္ခ်န္ကိုက ထုတ္ေဖာ္ေျပာသြားခဲ့ပါတယ။္
လိုင္ယြန္အသင္း ဆီမီးဖိုင္နယ္ကို တက္လွမ္းသြားခဲ့တာကလည္း သူတို႔အသင္းရဲ႕ အႏိုင္ရလိုစိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ ဇင္ခ်န္ကို က ယံုၾကည္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။“သူတို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ထက္ ပိုျပီး အႏိုင္ရခ်င္စိတ္ ျပသခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို ျမင္ရလြယ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ ေနာက္တစ္ဆင့္တက္သြားတာပါ။ ဒီလိုျပိဳင္ပြဲ ဒီလိုအဆင့္မ်ိဳးမွာ ပိုေကာင္းတဲ့အသင္းဆိုတာ မရွိပါဘူး။ အႏိုင္ရလုိစိတ္ကပဲ အေရးၾကီးတာပါ” လို႔ ထပ္ျပီးေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။
မက်ဆီကို အသင်းက ထွက်ခွာခွင့်ပေးတာက ဘာပြဿနာကိုမှ ပြေလည်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ အသင်းဟောင်းကို သတိပေးလိုက်တဲ့ ရော်နယ်ဒို
ဂါဘရီရယ်လ်ကို ခေါ်ယူရန် သဘောတူညီမှု ရရှိသွားပြီး နောက်တစ်ပတ်မှာ လန်ဒန်ကို ရောက်လာတော့မယ်